लकडाउन डायरी निबन्ध लेख्ने उत्कृष्ट १० विद्यार्थीसँग महानायक राजेश हमालको अन्तरमन्थन | Aaja ko Shiksha
‘सूर्य गुराँसे रङ्गमा पोतिएर आफ्ना कोमल स्पर्शहरु छर्न आतुर थियो र पहाडका अन्तराकुन्तराबाट चिहाइरहेको थियो । चराचुरुङ्गीहरु चाचा र चुचु गर्दै रमाइरहेका थिए । चन्द्रमाले आफ्ना शीतल ती थोपाहरु वृक्षहरुको पातहरुमा टिल्पिलाइरहेका थिए । हिमालहरु चाँदी झैँ टल्किने ती मोतीका दाना देखाई मुस्कुराइरहेका थिए । यस्तो अनुपम वातावरणमा मलाई पनि निबन्ध लेख्ने उत्साह जाग्यो र ‘मेरो बन्दाबन्दी डायरी’ शीर्षकमा निबन्ध लेख्न बसेँ...,’ यही साउन १६ को साँझ एउटा विशेष कार्यक्रममा विद्यार्थी शुभेच्छा कार्की आफ्नो निबन्धको पहिलो हरफ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
अर्की विद्यार्थी स्मृति विष्टले अंग्रेजी भाषामा आफ्नो निबन्धको सार भन्दै हुनुहुन्न्थ्यो–'Let me express what else good the lockdown has done to me. Assisting my parents in their farm, I have gainedawhole new set of skills, which has helped me stay grounded to our basic realities. These experiences, I believe, are tied to the life long skills of understanding how much less money is actually needed to stay happy and connected with my family. I have also come much closer to seeing the level of struggle my parents put for our education and future…'
(लकडाउनले मलाई राम्रो पनि गरेको छ भन्ने प्रकट गर्न चाहन्छु कि यसले गर्दा मेरा बा–आमालाई खेतीपातीमा सहयोग गर्न र मैले नयाँखालको सीप सिक्न सकेकी छु । जसले हाम्रो वास्तविक धरातलमा टेक्न मद्दत पुर्याएको छ । यी अनुभवबाट पैसाभन्दा पनि कसरी खुशीसाथ परिवारसँग जोडिएर रहन सकिन्छ भन्ने बुझाईलाई एउटा जीवनपर्यन्त सीपको रुपमा लिन सकेकी छु । अनि मेरा बा–आमाले हाम्रो शिक्षा र भविष्यका निम्ति कति संघर्ष गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा नजिकबाटै नियालेकी छु...)
कोरोनाको महामारीसँगै लगाइएको लकडाउनमा बालबालिका अनि किशोरकिशोरी विद्यार्थीले के सोचे, के गरे अनि कसरी त्यसलाई व्यक्त गरे होलान् ? यी प्रश्न हरेक अभिभावकमा थिए र अहिले पनि छ । माथि प्रस्तुत दुई प्रसङ्ग तिनै विद्यार्थीका अभिव्यक्ति हुन्, जसमा लकडाउनभरी गरिएका अनुभूतिलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा प्रकट गरिएका छन् ।
यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण करिव पाँच लाख विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) दिन पाएनन् । एसइइ स्थगनको आकस्मिक समाचार सुन्नुपरेका विद्यार्थीहरु लगत्तै लामो समय ‘लकडाउन’ अर्थात् बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्यो । घरभित्रै मनलाई कस्नु पर्यो । कति विद्यार्थी शुरुका दिन हडबढाए । ‘परीक्षा स्थगन भयो, लौ बर्बाद भयो’ भनेर निकै सोचे उनीहरुले । कतिले भविष्यमा ‘यो बन्छु, त्यो बन्छु भन्दाभन्दै चौपट नै भयो कि क्या हो !’ भन्दै पीर माने । भविष्यको अँध्यारो देखेर वर्तमानमा चिन्तित अनुहारहरु निकै डराए पनि । लकडाउन शुरुताकाको प्रारम्भिक दृश्य थियो यो । तर, लकडाउनको मध्य अवस्था हुँदै अन्त्यसम्म आइपुग्दा ती डराएका मनहरु यसरी सम्हालिन्छन् कि भविष्यको अँध्यारो एकाएक उज्यालिन्छन् । आशाका किरण छरिन्छन् । घरभित्र जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने अनि गर्नुपर्ने काम कति हुँदो रहेछ भन्ने सीपको विकास आफैंमा हुन थाल्छ । एकाएक बालबालिका त्यो निष्कर्षमा पुग्छन् । अनि कोरिन्छन् ती अनुभूतिहरु एउटा निबन्धमा ‘मेरो लकडाउन डायरी’ शीर्षकमा ।
हो, विद्यार्थीका यस्तै अनुभूति प्रष्फुटन गराउन शिक्षामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था हेलम्बु एजुकेसन एण्ड लाइभ्लीहुड पार्टनरसिप (हेल्प)ले सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थीमाझ निबन्ध लेखन आह्वान गर्यो । लकडाउनकै बीचमा गरिएको त्यस आह्वानमा ४६ जनाले भाग लिए । लेखिएका निबन्धमध्ये उत्कृष्ट १० वटा छान्ने र तीमध्ये पनि सर्वाेत्कृष्ट लेखनलाई पुरस्कृत गर्ने हेल्पको योजना रह्यो । त्यही योजनाअनुसार दुईजनालाई नगद पुरस्कारसहित छात्रवृत्तिका निम्ति छनौटमा परेको घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो । उत्कृष्ट बाँकी ८ जनालाई पनि हेल्प छात्रवृत्तिका निम्ति ‘इलिजिबल’ योग्यतम भएको जनाऊ दिनु थियो ।
हुन पनि, हेल्पले यसै गर्यो । यही साउन १६ गते साँझ भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गर्दै उत्कृष्ट १० जनाको नाम घोषणा गरियो ।
उत्कृष्ट निबन्ध लेखक विद्यार्थीहरुका नाम घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमाल । हमालले घोषणा गर्ने क्रममा उत्कृष्ट पहिलो र दोस्रो हुन सफल निबन्ध लेखक विद्यार्थीका अनुभूति सुन्नुभयो । प्रथम हुन सफल भिमसेन मावि चौतारा साँगाचोकगढीकी शुभेच्छा कार्की अनि द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएकी प्रगति इंग्लिस सेकेण्डरी स्कूल मेलम्चीकी स्मृति विष्टले आफ्ना निबन्ध वाचन गर्नुभएको थियो ।
निबन्ध सुनेपछि महानायक हमालले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीले निबन्ध अवश्य लेख्नु पर्छ । निबन्ध मलाई सानैदेखि नै प्यारो लाग्थ्यो । यसले मान्छेलाई कल्पनाशील, सिर्जनात्मक अनि विचारशील बनाउँछ ।’
स्कूल पढ्दा शिक्षकहरुले आफूहरुलाई निबन्ध र लघुकथा लेख्न ‘एसाइन्मेन्ट’ दिने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘हामी अनुसन्धान र खोजमेल गरेरै निबन्ध लेख्थ्यौं,’ आफू निकै कल्पनाशील भएको प्रसङ्ग हमालले सुनाउनुभयो, ‘हामी खुबै कल्पना गथ्र्याैं, मैले लेखेको कथा हेरेपछि मेरो बुवाले यो त कल्पनामा निकै डुब्दो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो ।’ त्यही कल्पनाशीलताले आफूलाई कलाकार बन्न मद्दत पुगेको हमालको बुझाई छ ।
हरेक व्यक्ति बेग्लै क्षमताको हुने भन्दै कसैले कोहीसँग आफूलाई दाँज्नुभन्दा पनि सिर्जनात्मक बनाउनुपर्नेमा हमालको जोड छ । अहिलेको प्रविधि दुनियाँमा बाहिरबाट मात्र सूचना/जानकारी लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । महानायक हमालको सुझाब छ, ‘लेखन बानी आफ्नो जीवनकै पार्टनर बन्न सक्छ । लेख्नु विद्यालय वा कुनै प्रतिस्पर्धाका निम्ति मात्र होइन, भोलि जुनसुकै पेशामा रहेपनि त्यसले अभिव्यक्ति दिने क्षमता बढाउँछ । त्यसैले भाइबहिनीहरु ! लेख्ने बानी नछोड्नुहोला ।’
‘ओभरलोडेड इन्फर्मेशन’ अर्थात् चाहिँदोभन्दा बढी जानकारी लिनु पनि हानिकारक हुने भन्दै हमालले विद्यार्थीलाई चाहिने र ठिक्कको सूचना लिन सुझाउनुभयो ।
कोरोना भाइरसको जोखिमले परिस्थिति असामान्य भइरहेको अहिलेको अवस्थामा यसको सामना कसरी गर्ने र यो समयलाई केगरी उत्पादनशील बनाउने भन्नेतिर सोच्न पनि विद्यार्थीलाई उहाँले सुझाब दिनुभयो । त्यसो त, ‘बोर’ भन्ने शब्द नै उच्चारण नगर्न उहाँको जोड थियो । दैनिक रुटिनले मानिस अनुशासनमा स्वतः रहन्छ भन्दै महानायकले भन्नुभयो, ‘बोर भयो भन्दै नभनौं । जीवनलाई उत्साही र व्यस्त बनाइराख्न समयलाई विभाजन गरौं । हरेक दिनलाई जीवनको लक्ष्य बनाऔं । अझ विद्यार्थीले युवा उमेरलाई बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म जीवनलाई कल्पनाशील, सिर्जनात्मक र विचारशील बनाउन तयार हुनु पर्छ ।’
झण्डै दुई घण्टा लामो अन्तरमन्थनमा विद्यार्थी, शिक्षक र निबन्ध मूल्याङ्कन समितिका मूल्याङ्कनकर्ता, हेल्पका अभियन्ताहरुसँग महानायक हमालले पूरै समय अन्तक्र्रिया गर्नुभयो । त्यो बीचमा बेलायतका एकजना शिक्षक ह्यान्डिडिङ्गल जो निबन्ध लेखनमै विशेष रुचि राख्नुहुन्छ, उहाँ पनि कार्यक्रममा जोडिनुभयो । २५ वर्ष अघि हेलम्बुको यांग्रिमा बोर्डिङ स्कूलमा पढाउनुभएका शिक्षक ह्यान्डिडिङ्गलले भन्नुभयो, ‘निबन्ध लेखनमा यसरी विद्यार्थीलाई सरिक गराउनु वास्तवमै प्रशंसनीय लाग्यो ।’ उहाँले राजेश हमालसँग २५ वर्ष अघि ठमेलमा खिचेको फोटो देखाउनुहुँदा वातावरण निकै रोमाञ्चक बनेको थियो ।
हरेक वर्ष एसइइ पार गरेर कक्षा ११ मा पढ्नका लागि विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको हेल्पले यसपालि अलि फरक तरिका अपनायो । सिर्जनात्मक कामबाटै विद्यार्थीसँग जोडिन ‘मेरो लकडाउन डायरी’ शीर्षकमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।
यस प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट १० भित्र भीमसेन माविका राजेन्द्र श्रेष्ठ, इन्द्रेश्वरी माविका बोलभक्त श्रेष्ठ, सोही माविकै करण श्रेष्ठ, थाङपालधाप माविकी सलिना खनाल, कालिका चेतना माविकी अनिशा लामिछाने, भूमेश्वरी माविकी अञ्जली जोशी, भोटेनाम्लाङ माविकी सीतामाया तामाङ र शारदा माविकी रुविना श्रेष्ठ पर्नुभएको छ ।
दश उत्कृष्टमध्ये प्रथम तथा द्वितीय हुनुभएका शुभेच्छा कार्की र स्मृति विष्टलाई १०–१० हजार नगद पुरस्कार दिइएको थियो । पाँच उत्कृष्टको निबन्धलाई राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत् प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
हेल्पका कार्यकारी निर्देशक जिमी लामाले निबन्ध लेखनका उत्कृष्ट १० जना विद्यार्थीलाई कक्षा ११ पढ्न हेल्प छात्रवृत्तिका निम्ति प्राथमिकतामा पारिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निबन्ध लेखन कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विपद्मा कसरी सोच्नु हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइयो । अनि त्यसलाई साँच्चै राम्रोसँग व्यक्त गर्नुहुँदो रहेछ ! वास्तवमै विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा देख्न र बुझ्न पाइयो ।’